सिर्जना, कला र विचारको त्रिवेणी: त्यसवेलाका तरुनी
पाँच सय चाँदीका डबल
मलाई लेखपढमा उत्ति रुचि थिएन　। गाना-बजानामा रुचि थियो　। त्यसैले पढाइ छाडेर भागी-भागी गाना-बजानातिर हिँड्थेँ　। यही कारण मैले धेरै पढ्न सकिनँ　।
तलेजु भवानीको मन्दिरमा 'सानु' भन्ने एकजना पुजारी थिए　। उनी ताल र सुरको राम्रो ज्ञान भएका गायक पनि थिए　। उनले नै मलाई गीत गाउन र बाजा बजाउन सिकाए　। 'सानु' मलाई असाध्यै माया गर्थे　। बुबा-आमाले मैले गीत गाउन थालेको राम्रै मान्नुभयो　। काकाचाहिँ कलामा लागेको भनेर हेलाँ गर्नुहुन्थ्यो　। त्यतिखेर कलामा लाग्नेलाई 'भाँड' भन्थे　। पछि रेडियो नेपालमा जागिर खाएर मासिक सय रुपैयाँ कमाउन थालेपछि त काका पनि दंग पर्नुभयो　। कलाबाट पनि कमाइ हुँदोरहेछ है ? उहाँ हाँस्नुहुन्थ्यो　।
म नक्कल गर्न सिपालु थिएँ　। कसैले गाएको देखे सुनिरहन्थेँ　। र, त्यसलाई मनमनै टिपिहाल्थेँ　। म मीठो स्वर भएको फुच्चेलाई सबैले माया गर्थे　। म घरमा नभनीकन दुई/तीनपटक गायब भएको छु　। बाआमा पीर गर्थे र खोज्न हिँड्थे　। काका त पिटिहाल्नुहुन्थ्यो　।
दाजु गोपालप्रसाद रिमाल मलाई धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो　। मलाई गाउनका लागि उहाँले नै गीत लेखिदिनुहुन्थ्यो　।
म दरबार स्कुल नपढेको भए सायद कलाकार हुन्नथेँ　। किनभने, शिक्षक बालकृष्ण समले नै मलाई पहिलो अभिनय गराउनुभएको हो　। उहाँ नाटक पढाउनुहुन्थ्यो　। उहाँले नै लेख्नुभएको 'मुकुन्द-इन्दिरा' नाटकमा मैले पनि खेल्न पाएँ　। त्यो नाटक पछि नारायणहिटीको बैठकमा पनि प्रदर्शन गरियो　।
गुरु बालकृष्ण समको 'प्रह्लाद' नाटकमा मैले अभिनय गर्न पाएँ　। त्यसमा राम्रो गाएँ पनि　। मेरो कलाबाट प्रभावित हुँदै श्री ३ जुद्धशमशेरले पाँच सय रुपैयाँ -५ सयवटा चाँदीका डबल) बक्सिस दिनुभयो　। म ११ वर्षे बालकले ठाउँ-ठाउँमा बिसाउँदै त्यो पैसा घरमा ल्याएँ र बुबालाई दिएँ　। बुबा निकै खुसी हुनुभयो　।
पहिले-पहिले दरबारको थिएटरमा मात्र नाटक हुन्थ्यो　। मलाई नाटक हेर्न रहर लाग्थ्यो　। 'फलानाको जय होस्' भनेर राणाको पुकारा गरेपछि मात्रै आठ-पहरियाले नाटक हेर्न दिन्थे　। 'जय' भन्नेहरूले मात्रै नाटक हेर्न पाउँथे　।
रेडियो नेपालमा पहिलो गीत
२००७ सालमा भर्खरै प्रजातन्त्र आएको थियो　। हरेक क्षेत्रमा नयाँ केही गरौँ भन्ने थियो, मान्छेहरूलाई　। नेपाली कांग्रेसका नेताहरूलाई खुब मानिन्थ्यो　। यत्तिकैमा तारिणीप्रसाद कोइरालाले विराटनगरको प्रजातन्त्र रेडियोजस्तै काठमाडौंमा पनि रेडियो स्टेसन स्थापना गर्ने सोच बनाएका थिए　। उनको सोचले साँच्चै फक्रने मौका पायो　। त्यसैले स्थापना भयो, 'नेपाल रेडियो'　। पछि मात्रै नेपाल रेडियोको नाम परिवर्तन भएर रेडियो नेपाल बनेको हो　।
नेपाल रेडियोको स्थापनाको दिन २००७ साल चैत १६ गते विशेष कार्यक्रमका बीच सुरुवात गर्नुपर्ने थियो　। तर, कसरी ? अरू कविता सुनाउने मुडमा थिए　। म के गर्ने भन्ने अन्योलमै थिएँ　। 'ल रिमाल सबैभन्दा पहिले तिमी गाऊ' भीडको कसैले उक्सायो　। र, मैले शंकर लामिछानेले लेख्नुभएको गीत गाउन सुरु गरेँ-
मेरो दिल टुक्रा बनेर एकदिन
आँखाको बाटो बहनेछ
भष्म बन्ला दिल मेरो
जग्गेको आगोमा एकदिन
बनेर राखेको सिन्दुर
खासमा शंकर लामिछानेले लेखेको यो एउटा भावुक कविता थियो　। तर, मैले गीतमा रूपान्तरण गरिदिएँ　। रेडियो नेपालबाट प्रसारण भएको यो पहिलो गीत त्यही दिन गाइएला भनेर मैले सोचेको थिइनँ　। शंकर मेरा भान्दाइका छोरा थिए　। घरमा निकै आउजाउ हुन्थ्यो　। गोपालप्रसाद रिमाल, शंकर लामिछाने र मेरो संगत निकै बाक्लो बन्यो　। मैले गीत गाएको देखेर शंकर मुग्ध हुन्थे　। एकदिन उनले त्यो गीत थमाउँदै भनेका थिए, 'यो कविता मलाई असाध्यै मन परेको छ, तँ गाइदे न है　!'
मलाई कविताका शब्दले भित्रैसम्म छोयो　। संगीत पनि म आफैँले तयार गरेँ　। तर, गीत पाउनु, संगीत भर्नु र गाउनुसँग नेपालमा प्रजातन्त्र आउनुको कुनै संयोग थिएन　। गीत त्यसै थन्किरहेको थियो　।
राणाहरूको घोडा बाँध्ने तबेलामा नेपालको पहिलो रेडियो बज्न सुरु हुनै लाग्दा प्रत्यक्ष प्रसारणमा मैले गीत गाउन थालेँ- 'मेरो दिल टुक्रा बनेर...।' प्रजातन्त्र आउनेबित्तिकै यो गीत यसरी काम लाग्ला र नेपालको इतिहासमा यसले यसरी नाम राख्ला भनेर न त मैले सोचेको थिएँ　। न त शंकर लामिछानेले नै　।
त्यसवेलाका युवती र मेरो प्रेम
त्यसवेला मास्टर रत्नदास प्रकाशको गायकी र अभिनयको प्रशंसा दरबारभित्र र बाहिर पनि उत्तिकै हुन्थ्यो　। रत्नदास प्रकाश भनेपछि म पनि हुरुक्कै हुन्थेँ　। म सात-आठ वर्षकै उमेरमा गीत गउने र अभिनय गर्न थालेँ　।
राणाकालमा दरबारभित्र धेरै सुन्दरी थिए　। वि.सं १९९९ सालतिर　। म जवान थिएँ　। नाटक देखाउन र गीत गाउन दरबारबाट हामीलाई बोलाइरहन्थे　। अहिले धमिलो सम्झना मात्रै छ, दरबारका रानीहरू पनि रथ चढेर नाटक देखाउने मण्डपसम्म आउँथे　। त्यसैवेला, मोहनशमशेरको दरबारमा काम गर्ने एउटी ठिटी थिई　। नाम त याद छैन　। साह्रै राम्री　। तिनको शरीरको के प्रशंसा गर्नु ? बान्की परेको थियो　।
तिनी वेला-वेलामा मेरोअघि पैसाको पोका फालेर आफ्नो प्रेम देखाउँथिन्　। यसरी अरू सुसारे पनि मलाई पैसा फ्याँक्थे　। अरूमार्फत मलाई उपहार पठाउँथे　। अरूभन्दा त्यो केटी विशेष थिई　। सायद म कलाकार भएर होला, उसको मप्रति विशेष आशक्ति थियो　।
एकदिन मलाई भनी, 'म तपाईंसँग विवाह गर्न चाहन्छु　।' आफ्नो बनाउन धेरै प्रयास पनि गरी　। दरबारै छाडेर मसँग विवाह गर्न तयार थिई ऊ　। मैले एकैपटकमा 'हुन्न' भनेँ　। पछि ऊ खुब रोएकी थिई　।
दरबारमा काम गर्ने महिला कलाकार भनेपछि हुरुक्कै हुन्थे　। हामीसँग अँगालो मार्ने, जिस्कने, चुम्बन गर्ने त सामान्यजस्तै थियो　। त्यसवेला घरानियाँ आइमाई पनि मसँग विशेष आशक्ति राखेर प्रेम गर्थे　। तर, मैले कहिल्यै पनि उनीहरूतिर नजर लगाइनँ　।
त्यसवेलाको एउटा घटना छ, कहिल्यै बिर्सन्न　। अहिलेको जावलाखेल चिडियाखानाको एउटा कुनामा रहेको घरमा म गीत गाउन गएको थिएँ　। त्यो घर अहिले पनि होला　। मेरो गीत सुन्न त्यसवेलाका खानदानी परिवारका छोरीहरू पनि आएका थिए　। मैले गीत गाइसकेपछि एउटी ठिटीले मलाई तानेर घरभित्र लगी　। त्यसले मेरो गालामा म्वाइँ खान थाली　। म लाजले रातो भएँ　। म फुत्किन सकिनँ　। पछि म त्यहाँबाट रुँदै भागेँ　। म जवान थिएँ र अनुशासित पनि　। कहिल्यै केटीको पछि दौडिनँ　। तर, मप्रति धेरै केटी आकषिर्त हुन्थे　। यो घटनाले थाहा हुन्छ, अहिलेका जस्तै त्यसवेलाका युवती पनि छाडा थिए　।
हुन त मैले पनि एउटी केटीलाई प्रेम गरेँ　। एकदिन दाइ गोपालप्रसाद रिमालसँग पशुपति घुम्न निस्केको थिएँ　। त्यसैदिन पशुपति भजनमण्डलीमा बसेर मैले पनि गीत गाएँ　। श्रोताहरूको भीडमा एउटी मगर युवती थिइन्, जो साह्रै ध्यान दिएर गीत सुन्दै थिइन्　। उनको मौनताले संगीतप्रतिको अनुराग झल्काउँथ्यो　। म उनलाई हेरेर मुग्ध भएँ　। उनको सौन्दर्यमा के थियो कुन्नि, म त एकैपटकमा खुब आकषिर्त भएँ　। उनलाई प्रेम गर्न पो थालेछु　। पछि उनी मेरो नजरबाट धेरै समय हराइन्　। पाँच वर्षपछि मात्र उनी भेटिइन्　। उनी बालविधवा रहिछन्　। मैले उनलाई प्रस्ताव राख्न पनि सकिनँ　। मेरो प्रेम त्यसै ओइलायो　।
रेडियो नेपालमा गीत गाउन थालेपछि म त्यसवेलाको सेलिब्रेटी बनेँ　। मेरा फ्यान चिठीसँगै शुभकामना पठाउँथे　। धेरै केटीले प्रेम-प्रस्ताव पनि राखे　। रेडियोमा एकजना थिइन्, कल्याणी　। उनी रेडियोमा 'काव्यकुञ्ज', 'बाल कार्यक्रम' चलाउँथिन् र समाचार वाचन पनि गर्थिन्　। उनी राम्री पनि थिइन् र बुझ्ने पनि　। म एक्कासि उनको नजिक हुन थालेँ　। मलाई उनी भित्रभित्रै मन पर्न थाल्यो　। प्रेमप्रस्ताव राख्न सकिनँ　। हाम्रो लमी बने रेडियोका समाचार सम्पादक भोग्यप्रसाद शाह　। एकदिन भने, 'हरि, तिमी कल्याणीसँग बिहे गर, सबै कुरा पनि मिल्छ　।' उनले कल्याणीलाई पनि 'हरिसँग विवाह गर, राम्रो हुन्छ' भनेका रहेछन्　। त्यसपछि हामी विस्तारै नजिक हुन थाल्यौँ　। ०१४ सालमा हाम्रो विवाह भयो　। अब त बूढो भइयो　। बैंसको जीवन मात्र के जीवन हो र ? अहिले पनि म कल्याणीलाई तरुनी देख्छु　। बुढ्यौलीमा त माया झन् बढ्नेरहेछ　।
रंगमञ्चमा महिलाको प्रवेश
२००७ साल अघि　। अर्थात् पद्मशमशेरको पालामा　। उनी अरू राणाशासकको तुलनामा आफूलाई निकै सुधारवादी देखाउन खोज्थे　। त्यसवेला फाट्टफुट्ट हिन्दी नाटक खेलिन्थ्यो　। बालकृष्ण समले लेखेको पहिलो नेपाली नाटक मुकुन्द-इन्दिरा हामीले नै पहिलोपटक मञ्चन गराएका थियौँ　। नेपाली रंगमञ्चीय इतिहासमा नेपाली नाटक मञ्चन गरिएको यो पहिलोपटक हो　।
त्यसवेला मलाई एउटा जुक्ति फुर्‍यो　। त्यो के भने नेपाली नाटकमा महिला कलाकारको प्रयोग　। राणाशासनका वेला महिला कलाकारलाई नाटकमा अभिनय गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो　। तर, राणाहरू आफ्नो हबेलीमा भने विदेशी महिलाको अभिनय हेर्ने गर्थे　।
एकदिन श्यामदास बैष्णव र अर्को एकजना साथीसँग मिलेर मैले पद्मशमशेरकहाँ बिन्तीपत्र हालेँ, 'बाहिर आइमाई बिक्री हुन्छन्　। विदेश पलायन हुन्छन्, त्यसैले किन उनीहरूलाई यहीँ अवसर नदिने ?' हाम्रो बिन्तीपत्र हेरेपछि पद्मशमशेरले तत्कालै आदेश दिएछन्, 'अभिभावकहरू मान्छन् भने उनीहरूको स्वीकृति लिएर अभिनय गराउनू　।'
म आपतमा परेँ　। स्वीकृति त पाइयो　। तर, कसलाई अभिनय गराउने ? धेरैबेर सोचेपछि बुद्धिमाया महर्जन भन्ने एउटी युवतीलाई फकाएँ　। त्यो पनि एउटा लोभ देखाएर　। बुद्धिमाया त्यतिवेला डिल्लीबजारमा 'कुते' नामले चिनिने एकजना युवकको प्रेममा परेकी रहिछन्　। मैले र अर्को एकजना साथीले तिनलाई उनैले मन पराएको युवकसँग बिहे गराइदिने वचन दिएर नाटकमा अभिनय गरायौँ　। पछि यो जोडीको बिहेका लागि त्यतिवेलै तोलाको एक सय पाँच रुपैयाँ पर्ने दुई तोला सुन खरिदका लागि हामी साथीहरूले संयुक्त रूपमा पैसा उठाएका थियौँ　।
यसरी नेपाली रंगमञ्चमा महिला कलाकारको प्रवेश भयो　।
राणाकालमा सर्वसाधारणका लागि मुख्यतः डिल्लीबजारमा नाटक देखाइन्थ्यो　। म त्यतिवेला पनि 'हिट' थिएँ　। कहिलेकाहीँ भाग्छ भनेर आयोजकले थुनेर राखिदिन्थे　। नाटक हेर्न आएकाहरूले अभिनय मन परेर पैसा फ्याँक्थे　। तर, त्यतिवेला नोटको चलन थिएन　। सिक्का फ्याँक्दा टाउकोमा लागेर हैरान हुन्थ्यो　। राणाहरूकै पालामा हो, मेरा साथी पुष्प नेपाली (गायक) र सुष्मा राणा आइमाई बनेको नाटकमा पनि मैले अभिनय गरेँ　। राणाकालमा राजनीतिक नाटक गर्न नपाउने कानुन थियो　। त्यसैले सामाजिक नाटकमा मात्रै केन्दि्रत थियौँ, हामी　।
२००७ को आन्दोलनमा नाटकलाई नै प्रतिबन्ध लगाइएको थियो　। तर, प्रजातन्त्र स्थापनापछि भने राजनीतिक विषयका नाटकले प्रश्रय पाउन थाले　। राणाहरूकै शासनका वेला मैले गरेका धेरै नाटकका अभिनय मलाई याद छैन　। तर, जुद्धशमशेरको पालामा २००२ तिर ।　अहिलेको राष्ट्रपतिभवन रहेको शीतलनिवासमा मैले गरेको एउटा अभिनय भने अझै याद छ　। त्यो नाटकमा मेरो रोल थियो, मरेको मान्छेको कपाल सुम्सुम्याउनुपर्ने　। तर, कपाल सुम्सुम्याउँदा त्यो कलाकारले लगाएको नक्कली कपाल नै निस्कियो　। त्यसपछि त्यहाँको वातावरण हाँसोमय हुन लागेको थियो　। तर, मैले स्थिति सम्हालेँ　। मेरो रुवाइको बुलन्द अभिनय देखेर नाटक हेर्न आउने दर्शक पनि रुन थाले　।
लाटोकोसेरोको आवाज पछ्याउँदै
रेडियो नेपाल स्थापना भएको केही समयपछि रेडियोमा नाटक गर्न थालियो　। तर, नाटकको परिस्थितिअनुसार ध्वनिको व्यवस्था थिएन　। ध्वनिको समायोजन गर्न निकै गाह्रो थियो　। केही वर्षपछि मात्र ध्वनि रेकर्ड गर्ने सानो मेसिन आइपुग्यो　। म त रेडियोमा नाटक थालिएपछि निकै उत्साहित थिएँ　। त्यसवेलाका मेरा धेरै रात अनिँदै बितेका छन्　। म मध्यरातमा उठेर सानो रेकर्डिङ मेसिन बोकेर लाटोकोसेरोको आवाज, सिमसिम पानीको आवाज, पानी बेस्सरी वर्षेको आवाज, भ्यागुतो, झ्याउँकिरी कराएको आवाज रेकर्ड गर्दै हिँड्थेँ　। पछि त्यो आवाजलाई मिक्सिङ गर्थें र रातभरि बसेर एडिट गरेर नाटकमा मिसाउँथेँ　।
लाइभ गीत गाउँदा
ती दिन अहिले सम्झनामा मात्रै छन्　। अब फर्केर फेरि आउने छैनन्　। मैले रेडियो नेपालमा ७/८ सय नाटक निर्देशन गरेँ हुँला　। कहिलेकाहीँ लाग्छ, नाटकले मेरो गीत कला छोपिदियो　। त्यसवेला गीत रेकर्ड हुँदैनथ्यो　। लाइभ रेडियोमा गाउनुपथ्र्यो　। त्यसरी लाइभ गाउँदा बेसुरा हुने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्थ्यो　। डेढ सयभन्दा बढी लाइभ गाएँ　। पछि कोलकाता पुगेर ग्रामोफोनमा गीत रेकर्ड गर्न थालियो　। मैले गाएकोमा आफैँलाई मन परेको गीत 'फगत एक नजरमा' हो　।
हराए रेडियो नाटक
रेडियो नाटकमा दृश्य हुँदैन　। संवादले नै दृश्य उब्जाउनुपर्छ　। त्यसमा कुन पात्रले कस्तो लुगा लगाएको छ भन्ने देखाउन संवादकै प्रयोग हुन्छ　। रेडियो नाटक संवादप्रदान हुन्छ । तर, नाटकमा चाहिँ संवादका साथै दृश्य र अभिनयको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ　। रेडियो नाटक लेख्न अप्ठ्यारो हुने हुनाले अहिले लेखकहरू नै पाइन छाड्यो　। अचेल रेडियो नाटक आउँछन्, ती सबै टिनएजले लेखेका प्रेमका कुरा गर्ने नाटक मात्रै । 'बोक्सी' जस्ता स्तरीय मनोवैज्ञानिक नाटक अचेल विरलै मात्र आउँछन्　। फेरि रेडियोहरूले नाटक गर्न छाडे　। अब लाग्छ, विस्तारै हराए रेडियो नाटक　।
अहिले सबै कलाकार ओभर एक्टिङ गर्छन्　। मलाई अचम्म लाग्छ, किन त्यसो गर्छन् ? एउटा कलाकारका लागि खुलेर अभिनय गर्न नसक्नुभन्दा 'ओभर एक्टिङ' ज्यादै खतरनाक कुरा हो　। अचेल हिन्दी र नेपाली टिभीमा आउने शृंखलामा हेरिनसक्नुको ओभर एक्टिङ हुन्छ　। 'तिमी सन्चै
छौ ?' भन्दा उनीहरू यति धेरैथोक गर्छन् कि त्यो चरित्र नै मर्छ　। नेपाली कलाकारको समस्या नै त्यही हो　। अभिनयमा दर्शकको अगाडि बाँच्ने हो　। एउटा कलाकारले चरित्रसँग बाँचेको समय नै सत्यता हो　। लाग्छ, हाम्रा कलाकारले सही बाटो भेट्टाएनन्　।
बुढ्यौलीले ल्याएको निस्सारता
अब त बूढो भइयो　। शरीर धेरैथरी रोगको घर भएको छ　। बुढ्यौलीसँगै गाँसिएर आएको दमको दीर्घरोगले म पहिलेजस्तो भालेको डाकअघि नै 'मर्निङ वाक' मा निस्कन सक्दिनँ　। पाँच बजे नै निद्रा खुले पनि ओछ्यानमै पल्टेर भगवान्लाई सम्भिmरहन्छु　। फोक्सोको रोग छ　। जुनैवेला पनि अक्सिजन लिइरहनुपर्छ　। डाक्टरले कम्तीमा २० घन्टा अक्सिजन तान्नू भनेको छ　। सास फेर्नै निकै गाह्रो छ　।
रंगमञ्चबाट अघोषित अवकाश लिएको पनि धेरै भइसक्यो　। दुई छोरा अमेरिकामा छन्　। साथमा कल्याणी छिन्, जुनैवेला पनि मेरो स्याहारमा तल्लीन　। उनी नभएको भए मेरो जीवन के हुन्थ्यो होला ? म सोच्न पनि सकिदनँ　। एक्लो जीवन बाँच्नुपर्ला भन्ने पीर छ　। मृत्युसँग डर लाग्छ　। एक-अर्काविना बाँच्न सक्दैनौँ　। अब एउटै मात्र इच्छा छ, भगवान्सँग प्रार्थना पनि छ, बाँचुन्जेल सँगै बाँचु, एक्लो जीवन चाहिँदैन　।
Posted by Narthunge at 4:59 AM